FILAZANA MIKASIKA NY FIKATONAN’NY VAROTRA MANDRITRA NY FARAN’NY HERINANDRO ANAOVANA NY « FIHIBOHANA TANTERAKA »
Appel à candidature pour le recrutement de « Médecin Généraliste »
Recrutement spécialiste en acquisition
Recrutement d’un coordonnateur de projet
Tao aorian’ny fivoriana tamin’ny alalan’ny teknolojia vaovao niarahan’ny fankan-kevitra eo amin’ny mpisehatra lavanila (Conseil National de la Vanille na CNV), izay tsiahivina fa hivondronan’ny mpamboly, sehatra tsy miankina miisa 11 … Read More
📣 Vaovaon’ny faritra: Amoron’I Mania
Fampiroboroboana ny sehatry ny asatanana eny anivon’ny faritra. Ho fanohanana ara-teknika sy ho fampahaizan’asa ny sehatry ny asatanana mba hirosoan’ireo mpanao asatanana bebe kokoa makany amin’ny matihanina dia nizara karatra … Read More
Isan’ny andraikitra sahanin’ny eto anivon’ny minisitera ny fanamarinana ny fitaovam-pandrefesana toy ireo fitaovam-pandanjana ampiasana eny an-tsena izay tafiditra ao anatin’ny fiarovana sy fitsinjovana ny mpanjifa. Nanatanteraka izany fanamarinana izany ny … Read More
Tontosa omaly sy anio ny fanentanana nataon’ny Sampan-draharaha misahana ny ady amin’ny kolikoly ho an’ireo mpiara-miasa ao amin’ny Foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Asatanana eto anivon’ny MICA. Ny hetsika fanentanana izay … Read More
FIVORIANA MIENDRIKA ATRIKASA EO ANIVON’NY « Comité National du Codex Alimentarius de Madagascar (CNCA) »
Tontosa ny 6 sy 7 may lasa teo tetsy amin’ny Centell Hôtel Antanimena ny fivoriana miendrika atrikasa teo amin’ny CNCA eto Madagasikara. Noho ny famehana ara-pahasalamana eto amin’ny firenena dia … Read More
📣 Vaovaon’ny faritra: Analamanga, Amoron’i Mania sy Menabe
Ho fanamafisana ireo hetsika fiarovana ny mpanjifa dia misesy hatrany ireo fidinana eny an-tsena sy eny amin’ny toerana fivarotam-panafody ara-dalàna izay tanterahan’ny ekipan’ny DRICA. Isan’ny toerana nanaovana ny fanaraha-maso ho … Read More